विमानबाट सस्तो उडानहरू, उत्तम मूल्यमा टिकटहरू खरीद गर्नुहोस्! ?
पत्ता लगाउनुहोस् उडानहरूमा र सबै ग्यारेन्टीहरूको साथ सबै भन्दा राम्रो मूल्यहरू हाम्रो सस्तो उडान खोजी ईन्जिनलाई धन्यवाद।
सस्तो उडान खोजी
तर इन्टरनेटमा अन्य विकल्पहरू छन्, त्यसैले हामी तपाईंलाई मुख्य उडान खोजी र तुलना वेबसाइटहरूमा पहुँच प्रस्ताव गर्दछौं।
Destinia: यस खोज इञ्जिनलाई धन्यवाद हामी उडानहरू राम्रो मूल्यमा र पूर्ण ग्यारेन्टीको साथ फेला पार्न सक्दछौं। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
उडानहरू: प्रसिद्ध होटेल खोज ईन्जिनले तपाईंलाई एकदम सस्तो उडानहरू प्राप्त गर्न उपकरण प्रदान गर्दछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
स्काईस्क्यानर: एक सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको खोज ईन्जिन र सस्तो मूल्यहरू फेला पार्नको लागि उत्तम प्रतिष्ठाको साथ। यदि तपाइँ यो कसरी कार्य गर्दछ भनेर हेर्न चाहानुहुन्छ तपाईले जानु पर्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
Lufthansa, एक जर्मन एयरलाइन र जुन युरोपमा सबैभन्दा ठूलो हो। यसको वेबसाइटमा तपाईं यसको उत्कृष्ट प्रस्ताव बीचमा उत्तम उडानहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
eDreams, संसारको सबैभन्दा ठूलो ट्राभल एजेन्सी मध्ये एक र उत्तम मूल्यहरूमा उडानको विविध प्रकारको प्रस्ताव। तिनीहरूसँग तपाईंको उडान बुक गर्नुहोस् यहाँ प्रवेश गर्दै.
जब पनि बिदा र छुट्टिहरू नजिक आउँछ, यो हामीलाई दिनचर्याबाट बाहिर निस्कन आउँछ। अरू ठाउँहरू जान्नु भन्दा उत्तम तरिका के हो। यदि धेरै वर्ष पहिले हामी अल्छी थियौं, धेरै दिनको लामो यात्रा गर्नु पर्ने भएकोले, आज त्यस्तो घटना हुँदैन। विमान को लागी धन्यवाद, हामी केहि समय मा हाम्रो गन्तव्य मा हुनेछ। यदि यो ठूलो लाभ गर्न को लागी हामी जोडौं सस्तो उडानहरू जुन हामी वेबमा फेला पार्न सक्छौं, हामीसँग हाम्रो संगठित छुट्टिको अंश हुनेछ।
सस्तो उडानहरू खोज्नका लागि शीर्ष सुझावहरू
लचिलो हुनुहोस्: यो एक राम्रो विकल्प हो जब यो फेला पार्न आउँदछ उडान सम्झौताहो, जब हामी विशेष मिति मार्क गर्दैनौं। त्यो हो, हामी सबैलाई थाहा छ कि उच्च मौसम अगस्ट महिना र राष्ट्रीय बिदासँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण यदि तपाईं उनीहरूबाट भाग्नको लागि पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए पक्कै पनि तपाईंले आफ्नो विमानको टिकटमा सोचेभन्दा धेरै बचत गर्नुहुनेछ।
टिकट छुट्टै: कहिलेकाँही, टिकट बुक गर्नुहोस् पछाडि फर्केर जानु उत्तम उपाय होईन। हामी बचतहरू भेट्टाउनेछौं जब हामी छुट्टै टिकट रिजर्भ गर्दछौं। अवश्य पनि, सबै भन्दा पहिले तपाईंले राम्ररी हेर्नुपर्नेछ, किनकि सबै कम्पनीहरूसँग यो ट्रिक हुँदैन।
तराजु: यद्यपि यात्रामा स्टपओभरहरू तिनीहरू एक ठूलो उपद्रव हुन सक्छन्, यस मामला मा, ती हाम्रो मुक्ति पनि हुन सक्छ। यसको कारण यसको मूल्य धेरै घटाइएको छ।
घण्टा: कुनै श doubt्का बिना, घण्टा पनि हाम्रो जेब असर गर्न सक्छ। यदि तपाईं कुनै खास दिनको लागि हतार गर्नुहुन्न भने पक्कै पनि समय बाधा हुनेछैन। त्यसो भए तपाई रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ कम लागत उडानहरू यदि तपाईं बिहानी वा रातमा पहिलोपटक छनौट गर्नुहुन्छ भने। कहिलेकाँही यस्तो हुन्छ कि मूल्यहरू थोरै कम हुन्छन्। तपाईंले भर्खर यसलाई जाँच गर्न आवश्यक छ!
जनवरी, फेब्रुअरी र नोभेम्बर हुन्छन् सस्तो महिना यात्रा गर्न। त्यसोभए, तपाईं जहिले पनि तिनीहरूको दिनहरू हेर्न जान सक्नुहुन्छ र त्यस समयमा आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग छुट्टीहरू छन् भने, तपाईं जहिले पनि दिमागमा बिदाको अलि बदल्न सक्नुहुन्छ।
कसरी उडान उडान बुक गर्न
उडान अनलाइन बुक गर्नुहोस्, यो इन्टरनेटको धेरै विचार नहुँदा पनि सबैजनाले गर्न सक्ने एक काम हो। थप रूपमा, तपाईं मध्यस्थहरू, प्रतीक्षा र अन्य प्रक्रियाहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईं यसको लायक लाग्दैन?
सबै भन्दा पहिले, हामी गर्न सक्छौं सबै भन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ उडान खोजकर्ता यो लेखको सुरूमा तपाईंलाई छोडेर आएको जस्तो। त्यहाँ हामी दुबै मिति र हामीले भ्रमण गर्न चाहेको स्थान छनौट गर्न सक्दछौं र हामी विकल्पहरूको एक श्रृंखला पाउनेछौं, उनीहरूको मूल्य र उडान कम्पनीहरूको साथ अर्डर। एक धेरै साधारण कार्य जुन हामी सेकेन्डको मामलामा हामी समक्ष गर्छौं।
खोजी ईन्जिनको रूपमा तपाईं दुबै स्काइस्केनर र रम्बो वा डेस्टिनिया प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ती सबै तपाइँको सुविधा हुनेछ कम्पनीहरूको सबै भन्दा राम्रो मूल्य सबै भन्दा राम्रो तपाईं राम्रो हातमा हुनुहुन्छ !.
एकचोटि हामीसँग छनौट भएपछि, ज्ञानको सरल व्यायाम सुरु हुन्छ कहिले हामी बुक गर्न पर्छ। जब हामी छुट्टीको योजना गर्दैछौं, हामी आइपुग्न र बोर्ड गर्न असमर्थ छौं। होइन, किनभने हामीले मूल्य थोरै समायोजन गर्न आवश्यक छ। यो गर्नका लागि तपाईले के जान्नुपर्दछ कि सामान्य नियमको रूपमा, टिकटको मूल्य करीव सात हप्ता पहिले लगभग १०% सस्तो हुनेछ। निस्सन्देह, यदि हामी हतारमा छौं भने, तपाईले जान्नुपर्दछ कि त्यसको प्रस्थानको उही दिनमा टिकटको मूल्यमा 10०% सम्म बढेको हुन सक्छ।
एकचोटी तपाईले खोजी, छनौट र गन्तव्यको छनौट गर्ने मुख्य कदमहरू चाल्नुभयो। अब यो आरक्षण मात्र बनाउने बाँकी छ। एकचोटि सकियो, तिनीहरूले तपाईंलाई मेलमा एक पुष्टिकरण ईमेल पठाउने छन् जुन तपाईंले प्रदान गर्नुभएको छ। तपाईंको टिकट नम्बर र आरक्षण कोड त्यहाँ प्रकट हुनेछ।
उडान अनलाइन बुकिंगका फाइदाहरू के हुन्?
हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै छन् अनलाइन उडान बुक गर्न सक्षम हुनुको फाइदाहरू। निस्सन्देह, सान्त्वना त्यस्तो चीज हो जुन हामीसँग सँधै हुनेछ। घरको सोफामा आरामसँग बस्नु भन्दा एजेन्सी जानु र पूरै बिहान त्यहाँ बिताउनु ठीक होइन। निस्सन्देह, यसका साथै हामीसँग अरू पनि छन् जुन उल्लेख गरिनु पर्दछ।
सूचना: होईन, जानकारी धेरै व्यापक छ। यो किनभने खोज ईन्जिनलाई धन्यवाद तपाई सक्षम हुनुहुनेछ विभिन्न कम्पनीहरूसँग तुलना गर्नुहोस्, साथै अधिक गन्तव्यहरू र तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै चीजहरूको मजा लिदै।
कुनै कार्यतालिका छैन: चिन्ता नलिनुहोस् यदि तपाईं दिनभर काममा खर्च गर्नुहुन्छ र जब तपाईं आइपुग्नुहुन्छ, यात्रा एजेन्सी बन्द छ। सास फेर्नुहोस्, अलि आराम गर्नुहोस्, र कम्प्युटर खोल्नुहोस्। त्यहाँ तपाईंले खोज्नु भएको सबै चीजहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तपाईं यसलाई प्रतिलिपि गर्न वा अर्को दिन समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं यसलाई नयाँ दृश्य लिन चाहनुहुन्छ भने।
मूल्यहरू: हामी टिप्पणी गर्दै छौं, केहि सधैं हामीलाई चिन्तित पार्ने चीजहरू मूल्यहरू हुन्। यस अवस्थामा, त्यहाँ मध्यस्थहरू हुनेछैनन् र हामी ती जहिले पनि भेट्न सक्दछौं लाभदायक प्रस्ताव भन्दा बढी। अवश्य पनि, सम्झनुहोस् कि तपाईंले जहिले पनि अन्तिम मूल्य निश्चित गर्नुपर्नेछ, एकचोटि सबै सम्बन्धित शुल्कहरू थप गरिसकेपछि। त्यसो भए पनि, यो पक्कै सस्तोमा सस्तो हुनेछ।
लन्डनका लागि सस्तो उडानहरू
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने लन्डन को लागी यात्रात्यसोभए तपाईंले जान्नुपर्दछ कि सस्तो उडानहरू पाउनको लागि तपाईंले यात्राको सात हप्ता अघि तपाईंको आरक्षण गर्नु पर्नेछ। यसको साथ, तपाईं लगभग २०% मूल्य बचत गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि, यसको लागि हामी सँधै सल्लाह दिन्छौं कि तपाईं सकेसम्म चाँडो खोज्न थाल्नुहोस् र सबैभन्दा माथि, तपाईंले तुलना गर्नुभयो। सब भन्दा सस्तो विमान यात्रा मे र सेप्टेम्बर मा हो।
पेरिसका लागि सस्तो उडानहरू
यदि तपाईंले रोमान्सको लागि रोज्नु भएको छ भने, त्यसो हुनसक्छ पेरिस तपाईको उत्तम गन्तव्य हो। एक गन्तव्य जहाँ तपाइँ आकर्षक स्थानहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं तिनीहरूलाई जहिले पनि सम्झनुहुन्छ र हैन, किनकि यो महँगो उडान थियो, त्यसो भए तपाईले आफ्नो यात्रा सुरु गर्नु अघि तपाईको यात्रा भन्दा १० हप्ता पहिले गर्न सक्नुहुन्छ। पेरिस हेर्न सब भन्दा उत्तम महिनाहरू सेप्टेम्बर र अक्टोबर हुन्।
रोममा सस्तो उडानहरू
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने रोम भ्रमण गर्नुहोस्तपाईंले आफ्नो विमान टिकट एक महिना र आधा अग्रिम बुक गर्नुपर्नेछ। यस तरीकाले तपाईले अरु किफायती मूल्यहरु पाउनुहुनेछ। साथै, यो याद राख्नुहोस् कि मे र जुन कम मागका साथ उत्तम महिनाहरू हुन्।
म्याड्रिड को लागी अर्थव्यवस्था उडान
एक खोज्नुहोस् म्याड्रिड को लागी उडान यो एकदम सामान्य र साधारण कुरा हो। सबै एयरपोर्टहरू यससँग जोडिएको छ। त्यसोभए, निश्चित रूपमा तपाई पनि धेरै र धेरै फरक समयमा पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ। मुख्य घण्टा र दिनहरू शुक्रवार वा सोमबार देखि टाढा रहनु उत्तम हो किनभने मूल्यहरू आसमानीमा निश्चित छन्।
बार्सिलोनाका लागि कम लागत उडानहरू
La बार्सिलोना यो पनि धेरै राम्रोसँग जोडिएको छ। दुबैको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू छन्। त्यसैले यो यात्रा कुनै समस्या छैन। कहिलेकाँही तपाइँले केहि यात्रा र उनीहरूको स्टपओभरहरू फेला पार्नुहुनेछ, तर हामीले केही यूरो बचत गर्न सक्दछौं कि भनेर हेर्ने मौका लिनु सधैं राम्रो हुन्छ। एक समय छनौट गर्नुहोस् जब त्यहाँ सानो प्रवाह हुन्छ र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो तपाईंको सस्तोमा कसरी सस्तो छ।